Home CLASSIC FOOTBALLER Ricardo Kaka Hooyo sheeko sheeko xambaarsan faahfaahinta sawirada
LB waxay soo bandhigeysaa sheekada Full Story of Legend Football waxaa sida ugu wanaagsan loo yaqaan Nickname; "Kaka". Ricardo Kaka Hore Carruurteena Sheeko iyo Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, nolosha xiriirka, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan caddayn-OFF-Pitch oo aan la ogeyn isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa, laakiin qaar ka mid ah tixgelin Ricardo Kaka Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Ricardo Kaka Hooyo sheeko xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Nolosha Hore
Ricardo Izicson ayaa ku dhashay Santos Leite Aka 'Kaka' wuxuu ku dhashay maalinta 22nd ee April 1982 ee Brasília, Degmada Federaalka, Brazil.
Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Simone dos Santos (macallin dugsi hoose) iyo Bosco Izecson Pereira Leite (oo ah injineernimo hawlgab ah).
Wuxuu heystey dhaqaale ahaan horumarinta dhaqaalaha kaas oo u ogolaaday inuu diirada saaro iskuulka iyo kubada cagta isla waqti isku mid ah. Markii uu ahaa toddoba, qoyskii Kaka ayaa u soo guuray São Paulo.
Sida dad badan oo isaga ka horeeya, Kaka wuxuu ka helay kubadda ciyaar uu jecel yahay. Iskuulkiisa ayaa marka hore helay tayadiisa oo uu ku soo diyaariyay naadiga dhallinyarada ee loo yaqaan 'youth club' "Alphaville,".
Ricardo Kaka Waqtiga Boyhood
Kaka ayaa kooxdiisii ​​ugu danbeysay u soo baxday finalka koobkaan. Tani waxay ka dhigtay inuu sii dheeraado kooxda naadiga São Paulo FC, oo isaga u soo bandhigay boos ka mid ah akadeemiyadda dhallinyarada. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Ricardo Kaka Hooyo sheeko xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Nolosha Xiriirka
Kaka ayaa la kulmay caruurnimadiisii ​​carruurnimada Caroline markii ay ahayd 15 isla markaana wuxuu ahaa 20 wakhtigaas.
Tani waxay ku dhacday 2002, iyada oo weli ku jirtay dugsiga Brazil. Midba midka kale wuxuu ku dhacay jacayl. Xitaa masaafo (kumaan kun oo mayl) ma kala saari karto iyaga. Labaduba waxay bilaabeen xiriirkoodii halista ahaa Kaká waqtigaan u ciyaarayay AC Milan. Intii uu maqnaa, Celico waxay ku biirtay kaniisadda Kaka Brazil kadibna wuxuu noqday wadaad wadaad ah, oo dhan u mahadnaqa iimaankisa Kiristaanka.
Run ahaantii, Caroline waa mid aad u qurxoon, aamin ah iyo diin Masiixi ah. Kaka ayaa si qarsoodi ah u sheegay in labadooduba ay ahaayeen bikrado kahor inta uusan soo jeedin.
Waxay guursadeen 23rd ee December 2005 ee Rebirth caan ah ee Masiix kaniisadda ee São Paulo.
Kaka Sawir Wedding
Lamaanayaashu waxay leeyihiin laba carruur ah: Wiilka Luca Celico Leite (wuxuu dhashay 10 June 2008) iyo gabar Isabella (wuxuu dhashay 23 April 2011). Labaduba waxay aad ugu dhow yihiin aabahood sida hoos ku aragtay.
Kaka iyo caruurtiisa
Ricardo Kaka Hooyo sheeko xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Sheekada Furiinka
2015, Kaká iyo Celico ayaa ku dhawaaqay furitaankooda warbaahinta bulshada. In uu erayada ..."Waxan jeclaan lahaa in aan dadweynaha u sheegno in, ka dib sagaal sano oo wada jir ah, waxaan caadi ahaan isku raacnay furiin. Guurkeennu wuxuu na siiyey labo caruur ah oo qurux badan oo aan jecel nahay. Marka la eego muhiimadda xiriirka, waxaan sii wadi doonaa inaan heysano, ixtiraamka, mahad-celinta, iyo jacaylka midba midka kale uu is-haysto. Waxaan ku weydiineynaa ciil iyo faham aad ku ilaalineyso asturnaanta marxaladda isbedelka. "
Xaaskiisa hore ee Celico ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday ... "Marka nin khiyaameeya, waa calaamad muujinaysa in xaaskiisa ay ku guuldareysatay." Erayadeeda ayaa taageeray Kaka taageerayaasha fariin ku saabsan sababta ay u sababeen is fahan iyo sababta ay uheshay.
Caroline waxay u aragtaa furitaankeeda
On 24 December 2016, Kaka ayaa xaqiijiyay in uu la macaamilo modelka reer Brazil ee Carolina Dias isagoo fariin u diray taageerayaashiisa 9.8million ee Instagram.
Cadeeymo muujinaya in Kaka uu ku soo biiray
Labada nin ayaa ku soo biiray arooska Lucas Moura ee arooska Sao Paulo.
Sidoo kale 2016 dabayaaqadii bilood ee la soo dhaafay, ayaa Caroline Celico si rasmi ah u xaqiijisay inay hadda xiriir la leedahay ganacsade reer Brazil Eduardo Scarpa. Kaka ayaa ku farxay markii uu arkay sawirkii hore ee xaaskiisa iyo cadawga tirada yar ee uu leeyahay. Eduardo wuxuu u muuqdaa inuu si fiican u daryeelayo jacaylkiisa cusub.
Caddaynta in Caroline Celico ay u dhaqaaqday
Ricardo Kaka Hooyo sheeko xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Nolosha Qoyska
GABAAN: Aabaha Kaka, Bosco Izecson Pereira Leite waa injineer maareysan oo ah asal qowmiyadeed oo heer qoys ah. Waxa uu hubiyay in labadiisa wiil (Kaka iyo Digão) ay heleen habdhaqan habboon. Waxay ahaayeen kuwo aad uga fogaaday xagga saboolnimada. Waxa uu siiyay waxbarasho sax ah iyo fursad ay ku doortaan kuna noolaadaan riyooyinkooda shaqo. Hoos waxaa ku qoran Bosco Izecson Pereira Leite iyo wiilkiisii ​​ugu horeeyay, Little Kaka.
Bosco Izecson Pereira Leite iyo Kaka oo yar
HOOYO: Kaka hooyada; Simone dos Santos waa macalinka dugsi hoose ee hawlgabka ah kaas oo dhisey is-dhexgal wanaagsan oo u dhaxeeya iyada, Kaka iyo inta kale ee qoyskeeda. Inaad noqoto macallin dugsi hoose waxa ay ka dhigtay faham wanaagsan oo ku saabsan jilitaanka qoyska. Simone dos Santos wuxuu ka danbeeyaa ku dhawaanshaha Kaka. Labaduba way kudhow yihiin sida sawirka hoose.
Kaka iyo Mum- Simone dos Santos
Gabar: Rodrigo Manuel Izecson dos Santos Leite (wuxuu dhashay 14 October 1985), oo loo yaqaano Digão, waa a Brazil kubada cagta ee kubadda cagta iyo walaalkiis kaliya ee Kaka. Waxa uu udub dhexaad u ahaa daafac dhexe intii uu shaqeynayay maalmaha xirfadiisa ciyaareed.
As Warbixinta Xasaasiyeyaasha Digauo ayaa ka mid ah liiska musharaxiinta kubada cagta ugu sareysa ee 10 oo aan waligood ka dhicin xirfadahooda. Digão ayaa u ciyaaray AC Milan muddo sanad ah ka hor inta uusan ku laaban qaaradda Ameerika si uu u sii wato xirfadiisa oo ku guul daraysatay.
Ilaa taariikhda, waxaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu qosolka badan ee abid ugu caansan garoonka Serie A. Taageerayaasha qaar ayaa sheegaya in uu yahay mid toos ah oo ka soo horjeeda Kaka si kasta oo suurta gal ah. Guud ahaan, Digão wuxuu ciyaaray 38 kaliya xirfadihiisa oo dhan isagoo aan dhalin gool. Waxa uu ka fariistay da 'yar oo 32 ah oo uu arkayay kubada cagta ma ahayn wacitaankiisa.
Maxaa ka lumay xirfaddiisa ku soo kordhay noloshiisa jacaylkiisa. Wuxuu si farxad leh u guursaday dhismaha Realtec Sabino. Kaká wuxuu ahaa boodhka arooska.
Ricardo Kaka Hooyo sheeko xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Shilalka Barkadda Dabaasha
Da'da 18, Kaká waxa uu ku dhacay khibrad xirfad leh iyo suuragal ahaan in uu curyaamiyo jahwareerka lafdhabarta sababtoo ah shil barkeed.
Nasiib wanaag, waxa uu soo kabsaday. Waxa uu tilmaamayaa dib u soo kabashada Ilaah wuxuuna tan iyo markii uu dakhligiisa ku darey kaniisaddiisa.
Ricardo Kaka Hooyo sheeko xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Asal ahaanta magaca
Walaalkiisa yar Rodrigo (oo loo yaqaano Digão) iyo ina adeerkiis Eduardo Delani ayaa sidoo kale ah ciyaartoy xirfadeysan.
Digão ayaa ugu yeeray "Caca" sababtoo ah awooda inuu ku hadlo "Ricardo" markii ay dhalinyaro ahaayeen. Dhaqaaq la'aanta ayaa ugu dambeyntii u soo baxday magaca 'Kaká '. Magaca 'Kaka' ma leh turjumaad gaar ah oo Portuguese ah.
Hoos waxaa ku qoran sawirka Kaka iyo walaalkiis kaddib markii ay ahaayeen caruur.
Little Kaka iyo Digão
Ricardo Kaka Hooyo sheeko xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Rumaysadkiisa
Kaká waa kaniisad diiniga ah oo kaniisadda ah oo xubin firfircoon ka ah Reer Paulo oo ku salaysan dib-u-kicinta Masiixiga.
Wuxuu noqday diin diin ah marka uu da 'yahay 12: "Waxaan bartay in ay tahay iimaan kaas oo go'aan ka gaaraya haddii wax dhacaan iyo haddii kale." ayuu yiri Kaka.
Waxaa loo yaqaanaa in uu sida caadiga ah ka saaro maaliyadkiisa si uu u muujiyo "Waxaan ku tiirsanahay Ciise T-shirt Kaka ayaa sidoo kale si firfircoon ugu hawlanaa xilliyada ducada ka dib ciyaarta finalka ee finalka. Tani waxa uu sameeyay ka dib Koobkii Adduunka ee Brazil 2002, AC Milan 2004 Scudetto iyo 2007 Champions League.
Intii lagu guda jiray dabaaldeggii ciyaarta ka dib Brazil 4-1 ayaa ka badisay Argentina 2005 Confederations Cup finalka, isaga iyo dhowr ka mid ah saaxiibadiis ayaa soo xirtay T-shaatiinka akhriya "Ciise wuxuu kuugu jecel yahay" luuqado kala duwan.
Iyadoo uu ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka ee FIFA ee 2007, wuxuu yiri markii uu da 'yaraa waxa uu doonayay inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah oo u ciyaara São Paulo isla markaana hal kulan u ciyaara Brazil xulka qaranka, laakiin taasi "Ilaah siiyey isaga oo ka badan intii uu weligiis weydiistay."
Ilaa taariikhda, nooca muusikada ugu jecel Kaká waa mid injiilka ah iyo buugiisa uu jecel yahay sidoo kale wuxuu yahay Kitaabka Qudduuska ah. In waraysi lala yeesho Brazil television O Globo, Kaka waxa uu muujiyay rabitaanka ah inuu noqdo wadaad xaajiin ah ka dib hawlgab.
Ricardo Kaka Hooyo sheeko xeeldheer Xogta Weriyeyaasha -Maxaa loo xusuusto
Loogu talagalay difaaca difaaca.
Dhaawacyada, wuxuu ku dhibtooday Real Madrid.
Si deg deg ah, xooggan, oo u shaqeynaya oo adag.
Inaad noqoto ciyaaryahan naadi ah oo leh jaangooyo wanaagsan, cagaha wanaagsan, iyo dheelitirnaan aad u fiican.
Awoodiisa uu ku qabo inuu difaaco difaacayaashii hore.
Inaad noqoto hogaamiye ka soo horjeeda iyo abuurista fursado.
Inaad noqoto rigoore sax ah.
Si aad u noqotid doorka khadka dhexe ee khadka dhexe.
Waxaan ku dadaalnaa saxnaanta iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!
Taariikhda Kubadda cagta ee Brazil
Gabriel Batistuta Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta